Ahoana ny fomba hanaovana rojo an-tranon'i Elizabethan? | Noti saka
Ahoana ny fomba hanaovana rojo an-tranon'i Elizabethan?
Monica sanchez | | aretina, saka, Cheats
Raha misy zavatra mankahala saka ataontsika azy ireo dia tsy isalasalana fa Rojo Elizabethan. Tena tsy mahazo aina ho azy ireo ny mitondra plastika manodidina ny lohany, tsy lazaina intsony fa miaraka amin'izany izy ireo dia manana olana maro amin'ny fanadiovana ny tenany ao amin'io faritra io. Na izany aza, indraindray isika tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mitafy azy, raha tsy izany dia mety hiharatsy ny fahasalamanao.
Afaka manome antsika (mivarotra) iray efa vita ny vet, fa inona no fomba tsara kokoa noho ny manao azy any an-trano? Raiso an-tsoratra raha te hahalala fomba fanamboarana rojo Elizabethan vita an-trano.
1 Rahoviana ianao no tsy maintsy manao ny vozon'akanjo Elizabethan?
2 Solon'ny rojo Elizabethan
3 Ahoana ny fomba hanaovana rojo an-tranon'i Elizabethan vita an-trano
3.1 Fitaovana ilaina
3.2 Dingana isan-kerinandro
3.3 Ary raha efa manana rojo Elizabethan ...
4 Ahoana ny fomba hanaovako azy araka izay azo atao
Rahoviana ianao no tsy maintsy manao ny vozon'akanjo Elizabethan?
Mbola tadidiko fa toy ny omaly aho rehefa naka ny saka halam-bolo. Natahotra be izy, na dia tsy vao sambany naka biby hanesorana ny taovam-pananahana ao aminy. Saingy samy hafa ny fidirana an-tsehatra tsirairay, satria koa ilay volony. Nandeha tsara ny zava-drehetra, ary raha ny marina dia tsy niandry ela intsony ny fiasan'ny fanafody fanatoranana, saingy tsy ela dia te hilelaka ilay faritra izy ireo, ka voatery apetraho amin'izy ireo ny vozon'akanjo Elizabethan izay novidiko tany amin'ny toeram-pitsaboana.
Mila milaza aho fa somary misalasala ny hametraka azy aho, satria plastika izay mahatonga azy ireo tsy mahazo aina. Fa nilaina izany. Nalainay ny iray amin'ireo saka nataoko tamin'ny 2006 ary satria tsy nitafy azy izy dia voan'ny virus ny ratra ary teo am-pandriana nandritra ny herinandro. Tsy te handalo ilay zavatra mitovy indray aho, noho izany Tsy maintsy nanandrana tsy nanala azy io aho.
Ho fanampin'ny maha-neuter na spay azy ireo dia tsy maintsy mitafy vozon'akanjo Elizabethan koa izy ireo raha:
Nijaly a tapaka.
Manana iray izy ireo aretina, na amin'ny sofina na amin'ny faritra hafa amin'ny vatana.
Se fampijalian-tena (Ohatra, raha misy hatavo izy ireo ary ny fikolokoloana dia niteraka ratra).
Ary koa amin'ny tranga izay mila manao bandy mandritra ny fotoana kelikely.
Solon'ny rojo Elizabethan
Fehiloha MAMY & MITSY ...
HXX 2 faribolana rojo ...
Rojo 2 LUII ...
Eny an-tsena dia hahita karazana vozon'akanjo maro ianao izay hanampy ny saka ho mahazo aina bebe kokoa noho ny hoe manao ilay Elizabethan, toy ny rojo matevina izay miaro ny ratr'ilay biby na Comfy, izay hahafahanao mandry am-pitoniana kokoa.
Fa raha te hitahiry vola kely ianao na afaka manamboatra ny vozon'akanjo tsy maintsy hotehirizin'ny saka, Manoro hevitra anao izahay hanamboatra an'i Elizabethan an-trano.
Ahoana ny fomba hanaovana rojo an-tranon'i Elizabethan vita an-trano
Alohan'ny hanombohana dia zava-dehibe ny fanomanantsika izay rehetra ilaina hatao mba hitehirizana fotoana. Mba hanaovana an'io rojo io dia mila a Kaontenera rano 2 litatra (arakaraka ny haben'ny saka), hety tsara fanjairana, stapler ary ny rojo ny volonao.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manapaka ny tampon'ny kaontenera, izay tery indrindra, ary koa ny ao ambaniny; amin'ity fomba ity, isika ihany no hanana ny tapany afovoany. Tadidio fa ny haben'ny kaontenera ampiasainay dia miankina amin'ny haben'ny sakafonay, ka raha hitanao fa misy kaontenera 2-litatra lehibe na angamba kely dia kely dia tokony hitady iray izay mifanaraka amin'ny habeny isika.
Ankehitriny, tsy maintsy manao izany isika manaova tapaka lava, ary amin'izany dia hahazo karazana ravina plastika isika.
dia homenay endrika cone izy io, ka ilay ampahany mankamin'ny hatoka dia tsy maintsy malalaka tsara ka tsy tery, ary tsy maintsy manana slot 4 farafaharatsiny handalo ny vozon'akanjon'ny saka. Ny ampahany hafa dia tsy maintsy mivelatra kokoa, mba hahafahan'ny biby mahazo aina araka izay azo atao; aza adino ny manantona azy amin'ny staples.
Farany, azonao atao ny manarona azy amin'ny lamba na kasety mba hialana amin'ny alahelo. Na koa andalana azy amin'ny landihazo ary avy eo amin'ny lamba. Saingy, eny, raha manao izany ianao dia mila ilay rojo ho somary malalaka kokoa, raha lehibe ny namanao, angamba kely loatra ny tavoahangy 2l.
Ary raha efa manana rojo Elizabethan ...
Raha nomena rojo Elizabethan ianao dia azonao atao koa ny manamboatra azy. Mila mampilahatra azy amin'ny fitaovana tianao fotsiny ianao ary mametraka azy amin'ny saka. Azony antoka fa tsy tiany izany, na farafaharatsiny mba tsy ho toy ny hoe Elizabethan tsotra 😉.
Ahoana ny fomba hanaovako azy araka izay azo atao
Ny fahazoana saka hanaiky hitafy vozon'akanjo toy izany dia mety ho sarotra tokoa. Fa satria isika indraindray tsy manan-tsafidy afa-tsy ny hametraka azy, dia tsy hanana safidy hafa izy raha hanaiky izany. Na izany aza, afaka manampy anao hihatsara izahay raha manome anao mari-pankasitrahana (saka mahasalama, manafosafo) raha mbola hitantsika fa tsy manandrana manala azy izy. Araka izany, tsikelikely ho takatrao fa raha mitondra tena tsara ianao dia mahazo zavatra tianao.
Afaka manampy anao koa izahay amin'ny alàlan'ny fahazoana menaka manitra voasary amin'ny famafazana (na ao anaty labozia) hampitony anao.
Tsy misy olona mankafy ny vozon'akanjo Elizabethan: na biby fiompy na olona. Fa manantena aho fa ireto toro-hevitra ireto dia nahasoa mba hahafahanao mandany andro sy araka izay tratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » aretina » Ahoana ny fomba hanaovana rojo an-tranon'i Elizabethan?
Maritza dia hoy izy:
Manome saka ny zanako vavy misy holatra amin'ny rambony izy ireo, ary efa manana saka iray salama tsara ao an-trano angatahin'izy ireo amiko. Ny fahamarinana nolazain'izy ireo taminay mandraka androany fa manangona izany izahay. Izay azoko atao
Mamaly an'i maritza
Ny zavatra tsara tokony hatao dia ny mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby mba hijerena sy hitsaboana azy.
Raha tena manana holatra ianao dia tsy misy fanafody mahomby an-trano hamongorana azy ireo.
Mandra-pahoviana no velona ny saka